राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी : केटी च्याप्दै, पुलिस कुट्दै
काठमाडौं, २७ पुस । अल्लारे बैंस अनि सर्वोच्च निकायको जागिर ! यति भएपछि अचेलका ठिटालाई के चाहियो ? जोशैजोशमा उम्लने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी हिरासतको हावा खान पुगेका छन् ।
त्यसदिन झड चल्दाचल्दै लिम्बूसँग गएकी केटी भने फुत्त गायब भएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।